Google ga - eweta ihe ngosi smartwatches abụọ na Android Wear 2017 na nkeji iri na ise nke 2.0 | Akụkọ akụrụngwa
Google ga-eweta smartwatches abụọ na Android Wear 2017 na nkeji nke mbụ nke 2.0
Jeff Chang, bụ maka Google nke gam akporo Wear na ọ bụ ezie na ọ bụghị onye a maara nke ọma maka ọha na eze, ụnyaahụ ka o mere iji gosi na ibu ibu lga-ebido n'ahịa, n'oge nke mbụ nke 2017, smartwat abụọches, nke ga-esoro ụzọ na-amalite site na Google Pixels.
Ekwuputara ozi a na Verge, nke gosikwara na ngwaọrụ abụọ ahụ, nke anyị na-amaghị ihe ọ bụla n'oge a, ga-arụpụta site na onye nrụpụta ọzọ, ọ bụ ezie na Google agaghị ekpughe ya n'oge ụfọdụ. Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ihe yiri nke ahụ mere na Pixels, ebe HTC bụ onye mepụtara ya, agbanyeghị na ekwenyeghị ya, na-ahapụ ikike niile maka Google.
Tinye akara ndị nwere ike ịmekọrịta Google na ọrụ ọhụụ a anyị hụrụ ọtụtụ ma ọ bụ kemgbe ahụ Motorolaa LG ma na-agabiga Asus, Huawei ma ọ bụ ọzọ HTC, nwere ike ịbụ ndị njem njem nke ọchụchọ ọchụchọ.
N'afọ sochirinụ 2017 yiri ka ọ malitere n'ụzọ siri ike na ihe na-ezo aka n'ahịa smartwatch, yana mbata nke ngwaọrụ abụọ ọhụụ, yana akara Google. Na mgbakwunye, mwepụta nke gam akporo Wear 2.0 ekwenyela, mmelite ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google nke ga-abịa na nnukwu ozi ọma na ọtụtụ ngwaọrụ.
Kedu ihe ị chere anyị nwere ike ịtụ anya site na smartwatches abụọ nke Google ga-amalite na ahịa na nkeji iri na ise nke afọ 2017?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Google ga-eweta smartwatches abụọ na Android Wear 2017 na nkeji nke mbụ nke 2.0
Enya Babe dijo
Zaghachi Enya Nena
Lelee ihe nchọgharị weebụ gị maara banyere gị
Akụkụ mbụ nke okporo ụzọ awara awara na ụwa ruru mba anyị gbara agbata obi, France